Mgbaze Ihe, Sodium Gluconate, Sodium Lignosulphonate - Chengli
Binzhou Chengli Materiallọ ihe onwunwe Co., Ltd. dị na mma mara mma nke Yellow River Delta Center City-Binzhou, n'ebe ugwu nke China. nke anyi ụlọ ọrụ bụ n'ọrụ ọkachamara na usoro mmepụta,nyocha,mmepe, na ire nke ihe admixtures.
CL-DA bụ ihe na-emebi emebi
Ndị na-ahụ maka ikuku ikuku CL-AEA
Binzhou Chengli Building Materials Co., LTD mgbe niile rube isi na àgwà dị ka ntọala, ọhụrụ dị ka ike, na-agbalịsi ike ihe mmako ụlọ ọrụ onye ndu. Iguzosi ike n'ezi ụlọ ọrụ anyị, ike na mma ngwaahịa nweta nnabata ụlọ ọrụ.
Polycarboxylate superplasticizer bụ thrid emana ihe superplasticizer nke na-aga n'ihu mepụtara site na lignosulfonate calcium ụdị na naphthalene ụdị superplasticizer. Polycarboxylate superplasticizer bụ gbanwetụrụ ihe superplasticizer nyochara ọhụrụ technology.it bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ envi ...
Dị iche n'etiti mmiri na-ebelata ụdị polycarboxylate superplasticizer na slump njigide ụdị
Ọtụtụ ihe ndozi ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ma mmiri na-ebelata ụdị polycarboxylate superplasticizer na slump njigide ụdị, ma ihe ojiji ojiji dị n'etiti ha? Mgbe ihe gị dị ka simenti, nchịkọta na ájá dị mma, naanị mmiri na-ebelata ụdị polycarboxylate superplasticizer ga ...
Environmental nchedo mmetụta na ihe admixture
Otu n'ime ndị ahịa anyị jụrụ m: 'olee otu mmepụta gị si aga? Ọ ka dị mma? nke ahụ na-eme ka m ghọta na China Environmental protection ugbua nwere nnukwu mmetụta na ngwaahịa ngwaahịa dị ka ihe ngwakọta na China. Ka m webata gi site na mbido. Dị ka anyị niile maara, China ịzụlite nnọọ qui ...